Indlu encinci ye-5 *Ingqwalasela enkulu kwi-charm yelizwe*
Zola, wonwabele amahlathi kunye nedama ngelixa uphulaphule izilwanyana. I-Oak Tree Cottage ikhupha umtsalane welizwe kwaye ibekwe eBel Air, MD. Indlu yeenyawo ze-480 yindlu yetrekta ehlaziyiweyo. Inegumbi elinye elipheleleyo elikumgangatho ophambili. Igumbi lokuhlala le-futon sofa liphindwe kabini njengebhedi egcweleyo. I-loft yiparadesi yabantwana eneemuvi, imidlalo kunye nezinto zokudlala, kunye nendawo yokufunda encinane. Igumbi lokulala eliphakamileyo linebhedi enye kunye nebhedi egcweleyo.
Kukho itafile encinci ngaphandle ukonwabela ikofu yakho yasekuseni. Thatha amaqanda amatsha kwihoko, ukonwabele kwitafile yendlu yasefama esongelwe eludongeni. Indoor ehleli isithuba itafile for 4. Jonga umgangatho iqhosha kwigumbi lokuhlambela kunye namaqhosha angaphezulu kwewaka lakudala adityaniswe kuyilo oluhle. Igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela zombini zineengcango zesitoli esiqhelekileyo ezineshelufu evulekileyo kwigumbi lokulala kunye nepaseji yokugcina. Uya kuba nokufikelela kwindlu yomthi kwipropati kwaye unokwenza amalungiselelo okudibana neebhokhwe ezisi-7, iinkukhu ezili-10, iikati ezi-2 zesibaya kunye nenja endala enye ehlala kwifama yaseTwin Oaks. Indlu yethu yasefama ikufuphi. Igumbi lakho lokuhlambela liza kuba nesepha yobisi lwebhokhwe ehambelanayo ethengiswa apha efama.
Indlu iye yacocwa ngokwemigangatho ye-Covid 19.
*Ndicoca iindawo eziphezulu zokucofa, ukuya kutsho kwigqudu locango
*Ndisebenzisa izicoci kunye nezibulali ntsholongwane ezivunywe yimpilo yehlabathi
arhente, kwaye ndinxiba izixhobo zokukhusela ukunceda ukuthintela ukuwela
*Ndibhekisa kuluhlu lokucoca ukucoca igumbi ngalinye ngocoselelo
*Ndibonelela ngezinto zokucoca ezongezelelweyo, ukuze ukwazi ukucoca njengoko uhlala
*Ndithobela imithetho yasekuhlaleni, kuquka naluphi na ukhuseleko olongezelelweyo okanye
2 iibhedi ezilala abantu ababini, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1
Siziikhilomitha ezi-1.8 ukusuka kwindlela ye-6.25 yeemayile ezininzi elandela indlela kaloliwe endala ye-Ma kunye ne-Pa enqumla eHarford County.
Ime kumgama oziikhilomitha ezi-5.2 yiJerusalem Mill. Yimyuziyam kunye nelali yaseQuaker yenkulungwane ye-18. Ibekwe ecaleni komlambo iLittle Gunpowder falls.
Sikwafumaneka malunga neekhilomitha ezi-2 ukusuka kumbindi wedolophu yaseBel Air. Inethala leencwadi elithandekayo, iindawo zokutyela ezininzi kunye neevenkile zeboutique.
ILadew Topiary Gardens ikwiMonkton MD kunye ne-9.3 yeemayile kude. Yifama yeehektare ezingama-250 eyakhiwa ngoo-1920 kunye noo-1930 enezona gadi zintle.
Ukusuka kwindlu yethu, kukuhamba ngemizuzu engama-37 ukuya kwiZibuko elingaphakathi laseBaltimore. I-Inner Harbour yindawo yokubona indawo kunye nekhaya kwiziko lesayensi, i-planetarium kunye ne-observatory, i-National Aquarium kunye neqoqo leenqanawa zemfazwe zembali.
Ifakwe phakathi phakathi kwe-Aberdeen Proving Ground kunye nesikhundla somkhosi e-Edgewood, ungafika nokuba yimizuzu engama-30. Siyintsapho yasemkhosini kwaye sikhetha ukuhlala ngaphandle kweposi eBel Air ngenxa yayo yonke idolophu ekufuneka ibonelele.
We are an active duty Army family living and loving that farm life in MD!
Sihlala kwindlu esebumelwaneni. Siza kukunika inombolo yethu yefowuni kunye ne-imeyile ukuze uyisebenzise ngexesha lokuhlala kwakho.